महानायक राजेश हमाल कति धनी छन् ? कति छ उनको सम्पति ? - Mitho Khabar
May 9, 2022 mithokhabarLeaveaComment on महानायक राजेश हमाल कति धनी छन् ? कति छ उनको सम्पति ?
काठमाडौं – आफ्नै मामा स्व. दीपक रायमाझी निर्देशित चलचित्र ‘युगदेखि युगसम्म’वाट फिचर फिल्ममा प्रवेश गरेका हमालले पहिलो चलचित्रबाटै अत्याधिक चर्चा पाए।
अभिनयमा प्रवेश गर्नुअघि भारतबाट प्रकासित फेशन नेट म्यागजिनमा उनले फोटो शेसन गरेका थिए भने काठमाडौमा सम्पन्न केहि फेशन शोमा र्‍याम्प मोडलिङ समेत गरेका थिए।
यीनै हुन अस्ट्रेलियामा नकाबधारी लुटेरालाई लखेट्ने बहादुर नेपाली चेली
June 24, 2022 mithokhabar
३० वर्षपछि खुल्छ यी राशिका भाग्यको ताला, शनि र सूर्यको दुर्लभ संयोगले विशेष प्रभाव पार्नेछ !